व्यवश्था मात्रै बदल्ने कि आचरण पनि ? « paniphoto
« “अखबार पढेन भने खबर थाहा हुँदैन, पढ्यो भने झुठा खबर थाहा पाइन्छ,” आज बन्द, आउँनुहोस् घुमघाम गरौं »	व्यवश्था मात्रै बदल्ने कि आचरण पनि ?
By -पानीफोटो- on Thursday April 28, 2011	-सागर वन्त- विनिपेग, क्यानडा-
« “अखबार पढेन भने खबर थाहा हुँदैन, पढ्यो भने झुठा खबर थाहा पाइन्छ,” आज बन्द, आउँनुहोस् घुमघाम गरौं »	3 comments to व्यवश्था मात्रै बदल्ने कि आचरण पनि ?
· जवाफ दिनुहोस्	आन्दोलनले व्यवश्था परिवर्तन गरिन्छ । तर आचरण परिवर्तन गर्ने कुनै आन्दोलन कसैलाई थाहा छ ?
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	सम्राट बस्नेत
· जवाफ दिनुहोस्	हामी सबै उस्तै छौ । नेतालाई लाग्छ, आफ्नो दलले मात्र देश बनाउँछ । हामीलाई लाग्छ, गाली गरेर मात्र देश बन्छ अनि सबै उस्तै ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	rajindra
· जवाफ दिनुहोस्	When we change, we can change everything. so change own attitudes.
यही Category बाटभागवद् गीतामा साम्यवाद !दशैं र मासुब्लगर कि अरु केहि ? – आफ्नै कुरा‘वैकल्पिक उर्जालाई बढावा दिऔं’सडक दुर्घटनामा मोटरसाइकल आलु जस्तो !!!छन् त, लोकतन्त्र र विकासका नमुनासुन्दरताको पोष्टमार्टमहनुमानढोका लज – कँही छ यस्तो सुबिधा !मलाई भ्रम भो मालिकहोमस्टेका लागि हामी कति तयार छौ ?Online Users9 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार